Ezikhathini zethu ezinzima, wonke umuntu ugcizelelwe. Umqashi uthola iphutha futhi ufuna ukuthi uphinde uphinde ubike umbiko okweshumi, ezindabeni zokuhlwazama komhlaba ezinye ukuzamazama komhlaba nokuhlaselwa kwamaphekula, umuntu wakho othandekayo unomhawu kuwe ngaphandle kwesizathu sezinsika zonke. Ukuzindla ngokucindezeleka, inqubo yokuzindla, sifunda kule ncwadi.
Uma konke lokhu kukukhipha, futhi uma ufika ekhaya, wehla ezinyaweni zakho, futhi ngezimpelasonto awukwazi ukuphumula, khona-ke sizokufundisa amanye amasu okuzindla okuzokusiza ekuqotheni, ukukhathala futhi kuyoba yindlela yokuvimbela kakhulu ukulwa nokuphazamiseka kwemizwa.
Iyini umphumela wokuzindla?
Ngokusho kwamaBuddha, abanaso ukucindezeleka noma ukulala. Futhi konke ngoba ukuzindla kuyindlela yabo yokuphila. Njengoba wenze umkhuba wakho wokuzindla, uzofunda ukuthi ungagxila kanjani emsebenzini wakho, ungakhathazeki, ungathola ukuphumula okuhle, uthole ukuvumelana kwangaphakathi, ngoba kubaluleke kakhulu kowesifazane.
Kuyaziwa ukuthi umuntu akadingi ukuzindla ngesisu esiphelele. Zikhethele ukuthi ungafaka noma ungafaka umculo othulile. Abanye abantu bacabanga ngokuthula okuphelele.
Isisekelo sokuzindla okuphumelelayo ukuphumula okukhulu. Lokhu akulula kakhulu ukufeza njengoba kubonakala kuwe. Phela, ezinye izihluthulelo zomzimba aziphumuli ephusheni.
Izindlela Zokuzindla Zokuphumula
Themba ngemuva kwakho (ungasebenzisi umcamelo "ophezulu" ngalokhu) bese uzama ukuphumula. Faka futhi uphume izikhathi eziningana. Uma uphumelela, ungase uzizwe umoya uphuma, umzimba uhambela embhedeni futhi uba nzima. Ngokuqhubekayo sizogxila ezingxenyeni ezihlukene zomzimba kusuka phansi phezulu.
Sigxila emlenzeni ngamunye, ngokuqala ngezinyawo. Bavumele baphumule, ake sicabange ukuthi ukucindezeleka kwehla kanjani. Kancane kancane sithuthela phezulu. Uma ufika ngokucophelela kulokhu kucabangisisa, "okuncane" kuzoba yizingxenye zomzimba ozogxila kulo, uma ukhululeka ngokwengeziwe. Le nqubo isetshenziswa, kokubili ngaphambi kokulala (ikakhulukazi uma ungakwazi ukulala ngokushesha), bese-ke, uma ufuna ukuphumula ngesikhathi esifushane.
Indlela yokuzindla yokuzindla
Inqubo yokuzindla ngokugxila isetshenziswa uma kunolwazi oluningi ekhanda lakho, kodwa udinga ukugxila entweni eyodwa. Kungcono kakhulu ukuhlala phansi noma ukulala phansi, ukholelwa ukuthi isikhundla se-lotus sizoba lula kulabo abahlanganyela ekuzindleni nasekusebenzeni i-yoga, kungcono ukuqala ngesihlalo esinokunethezeka noma nje ulale phansi.
Hlola ngokucophelela futhi uqaphele ngokuphelele into ethile noma isihloko. Kungaba yinoma yini, kusukela emvula, isitshalo sezindlu futhi iphele indebe emi etafuleni. Into eyinhloko lapha ukuthi imicabango yakho iphathwe ngale ndaba futhi akukho okunye okunye. Gcina ekhanda lakho isikhathi eside ngangokunokwenzeka. Ngokushesha uzokuqiniseka ukuthi umcabango ubuyela ngokushesha kulokho ozokwenza ukupheka ukudla, noma kumabhayisikobho owabukele. Siphinde sibuyela entweni ekhethiwe. Ngemuva kokusebenza okuningi, isikhathi sokuhlushwa siyokhula. Ngokwenza lokhu kuzindla, uzokwazi ukugxila kalula kunoma yiziphi izimo (isibonelo, kusiza ukulungele ukuhlolwa).
Ikhono lokuzindla ngokuphefumula
Inqubo yokuzindla ngokuphefumula yimbono yokuphefumula. Akudingekile ukuthi ushintshe ngokuqondile isigqi sokuphefumula kwakho, uzizwe nje ukuthi ukuphuma komoya kuphuma kanjani futhi kungene. Uma uphefumulela ngaphakathi nangaphandle, cabanga-kuze kube ngu-10 bese ubuyela komunye. Le ndlela izokuvumela ukuthi usebenzise isikhathi emgqeni noma ezokuthutha.
Inqubo yokuzindla ehlanganisa ukuhamba nokuphefumula
Le nqubo ingasetshenziswa uma iya ekhaya noma emsebenzini. Kuhle uma unesikhathi esiningi sokungahambi ngokushesha. Hlanganisa senza ezinyathelweni ezine, siphumelela - esithandathu. Umzimba uphefumula ngokujwayelekile, futhi imicabango igxile kule akhawunti. Uma kukhona amahle amahle nomoya omusha okuzungezile, khona-ke inzuzo kulokhu kuhamba izoba kabili.
Inqubo yokuzindla esiza ukuxazulula le nkinga
Okokuqala, ngokusemandleni ethu sizophumula. Khona-ke "silahlekelwa" ekhanda ukungqubuzana noma inkinga, kusukela ekupheleni. Kancane kancane usondela emsuka, uzoqonda ukuthi kungani lokhu kwenzeka. Sizothola "endleleni" isenzo, igama noma isizathu esibangele imiphumela ethile, bese uyothola ithuba lokulungisa konke.
Ukuqeqeshwa ngokuzenzakalelayo nakho ukuzindla
Kungcono ukwenza ukuqeqesha ngokuzivocavoca uma ufunda ukugxila kwengqondo nokuphumula ngokomzimba. Udinga ukuyisebenzisa ngaphambi kokulala, ukuze ungasadingeki uziphazamise ngokwakho.
Khumula futhi ugxile emicabangweni emihle. Inqubo yokuzindla incike esimweni ozoyithuthukisa. Uma udinga ukwandisa ukuzethemba kwakho, cabanga ngokwengqondo ukuthi: "Ngiyaqiniseka ngami." Gwema izinhlayiya "hhayi", ithwala uhlamvu olubi. Uma u-tyrant evela ehhovisi, cabanga: "Ukwesaba kwami ​​uLarisa Mikhailovna (umshayeli wokushayela, umqondisi) ulahlekile." Esikhundleni senkulumo ethi "Angifuni ukubhema," kungcono ukuthi "Isifiso sokubhema siphume kimi."
Phela, kubonakala ukuthi imicabango yethu inamandla amakhulu. Ngesikhathi sokuqeqesha ngokuzenzakalela, ukwethula yonke imininingwane impumelelo oyilwelayo, futhi njengokungathi sekuvele kwenzekile. "Sebenza" endaweni ofuna ukusebenzela kuyo, "phila" endlini noma idolobheni lamaphupho akho, "uzizwe" into oyifunayo. Kunezimo lapho abantu basebenzisa lezo zizindlo belashwa ngezifo ezingelapheki.
Manje siyazi ukuthi yiluphi uhlobo lokuzindla nokuzindla ukucindezeleka. Khetha inqubo yakho yokuzindla ekunambithekeni kwakho. Yenza umkhuba wakho, zama ukuhlala lapha futhi manje, nokungavikeleki kwakho, kusasa kanzima nokufutheka uLarisa Mikhailovna ngeke kukuthumele.
Indlela yokushayela ngokuphepha?
Ukuzihambela eLondon izinsuku ezingu-3
I-Hot Spanish Flamenco Dance - amasu nezinhlobo zokusebenza
U-Sergey Shnurov uncelise owesifazane okhulelwe uSobchak endabeni yobugebengu, ividiyo
Umculi MakSim ugijimise ukususa ngokucacile mayelana nezinguquko empilweni yakhe
Amakhukhi e-oatmeal yaseScotland
Amamodeli angavamile weviki leMfashini eNew York
Izitsha okumnandi kunazo zonke zonyaka omusha we-2016, iresiphi yesithombe
Yeka ukuthi ungaba kanjani "ugogo"?
Indlela yokugcina amazinyo ngesikhathi ukhulelwe
Ukushisa kwelanga okuphephile
Isimo sezulu eMoscow naseMoscow esifundeni ngoNovemba 2017 - Isibikezelo esinembile esivela kwi-Hydrometeorological Center yesifundazwe